Koshiyana umshefezo kwiGladAfrica Championship - Impempe
Koshiyana umshefezo kwiGladAfrica Championship
April 7, 2021 Impempe.com
Usaqhubeka ugingqigongqo njengoba amaqembu eshintshashintshana nokuqhwakela kwiGladAfrica Championship – lishone elangoLwesibili kuyiBay United enethezeke eqhulwini, kodwa elangoLwesithathu selishone sekubuyele iSekhukhune United.
Lokhu kulandela ukuthi iBabina Noko (Izingungumbane) zibambene neRoyal AM umdlalo uphela ngo 0-0 eChatsworth Stadium ngoLwesithathu ntambama. NgoLwesibili, iBay ibuye namaphuzu agcwele eKapa la ishaye khona iCape Town All Stars.
Lamaqembu ayalingana ngamaphuzu angu-35 kanti iSekhukhune siphezulu ngenxa yesibalo samagoli esingcono. Nokho iNatal Rich Boyz isangakujika konkeokho kwazise yona isenomdlalo esillele ngawo emuva.
IBay, Pretoria Callies, Free State Stars neBizana Pondo Chiefs basasalelwe yimidlalo eyishumi Kanye amanye amaqembu sekusele eyisishiyagalolunye.
Umqeqeshi weSekhukhune, uMcDonald Makhubedu ulibongile iphuzu aphume nalo kwiRoyal kwazise iphuzu nephuzu selibakulekile njengoba sekubhekwe enjanjenni nje.
“Kube wumdlalo omuhle phakathi kwamaqembu adlala Kahle. Bazame konke, nathi ngokunjalo futhi bekufanele sinqobe,” usho kanje uMakhubedu ngemuva komdlalo.
“Bawatholile amathuba, nathi sibe nawo futhi amaningi kunabo ngoba ngicabanga ukuthi yisikhombisa noma ngaphezulu awethu. Kodwa ke okubalulekile yoohuzu leli esilitholile, futhi ngiyabancoma abafana bami, bazokhandlile. Sizobamba leli phuzu sibheke emdlalweni olandelayo,” kuqhuba uMakhubedu.
IBabina Noko izobuyela enkundleni ngeSonto la izobhekana khona neCape Town Spurs ekhaya, okuwundlalo obukeka ulula kuyo uma uzobheka izindawo akuzo lamaqembu. I-Urban Warriors isalokhu iqhukuluze le ngasemsileni njengoba isasendaweni ka-15.
IBay yona izobe isekhaya ngoMgqibelo igadulusana nePolokwane City okuwundlalo ongelula kuwo womabili amaqembu.
Imiphumela yangoLwesithathu: Bizana Pondo Chiefs 0 Cape United 0; Uthongathi 1 JDR Stars 1; Cape Town Spurs 1 TS Sporting 1; Royal AM 0 Sekhukhune United 0.
Previous Previous post: U-Eymael uqashwe ngoMsombuluko wachithwa ngoLwesithathu kwiChippa
Next Next post: AmaProteas akhale ngaphansi kwiPakistan eCenturion